umnatha Ilaphu Factory | Abenzi base China Abenzi bemveliso
Ilaphu lempahla yeyoga
ilaphu lomqhaphu ipholiyesta
Kwizinga eliphezulu DTY ipholiyesta ngelaphu enemingxuma ngelaphu for nezemidlalo kunye naphakathi
Inkcazo yemveliso: Eli laphu ledayimane, inqaku lethu HS2038, linithiwe nge-100% ipholiyesta. Olu luphawu lokuphefumla kunye noluthambileyo. Kwangelo xesha, ngenxa yeempawu zobuchwephesha bomsonto we-DTY, inolulwana oluncinci. I-DTY ibizwa ngokuba yi-polyester yentsimbi eyenziwe ngombala, ethi inyangwe bubushushu kwaye ijijwe. Umtya we-polyester we-DTY uza kudala umnxeba othambileyo kwaye ukhululeke kwilaphu le-warp knit. Ezi chara ...
Nomoya warp ukunitha 100% ipholiyesta 75D umnatha ngelaphu zemidlalo
Inkcazo yemveliso: Olu luhlu lwephepha le-poly, inombolo yenqaku le-HS087, linithiwe nge-100% ipholiyesta. Ine-weave evulekileyo enepateni eqhelekileyo yemingxunya ukugcina iimbaleki zipholile ebaleni. Eli laphu le-polyester liphefumla ngokuphefumla, ngaxeshanye, lilaphu elilukhuni eliqinileyo. Olu luhlu lwe-warp olukiweyo lilungile kwiyunifomu yeembaleki, ijezi yezemidlalo kunye nethambeka njlnjl.
Custom 100% ipholiyesta ezemidlalo intaka iliso enemingxuma ngelaphu for nezambatho zemidlalo
Inkcazo yemveliso: Le ntaka iliso loloyilo lwentaka, inqaku lethu HS008, linithiwe nge-100% ipholiyesta. Ilaphu le-Birdeye luhlobo lwelaphu elisebenzayo, ekwabizwa ngokuba lilaphu lokufunxa umbilo, elibonisa ukuba ilaphu lentaka enamehlo elintaka lilaphu elinokuphefumla. intaka iliso enemingxuma ilaphu lisetyenziswa ngokubanzi ukwenza zemidlalo, nto leyo ikakhulu ngenxa breathability kunye ukubila ukufunxeka. Singenza umsebenzi ohlukileyo kwilaphu ac ...
100% ipholiyesta emhlophe enemingxuma ngelaphu ukunxiba ezemidlalo
Inkcazo yemveliso: Olu phononongo lwe-polyester encinci ye-mesh, inqaku lethu le-HS068, lilukwe nge-75 denier ipholiyesta yentsimbi. Ilungele zombini iintloko kunye neebhotile zemidlalo kunye neempahla ezisebenzayo kwezemidlalo kubandakanya i-lacrosse, ibhola ekhatywayo, ibhola ekhatywayo kunye nebhasikithi. Ine-weave evulekileyo enepateni eqhelekileyo yemingxunya encinci ukugcina iimbaleki zipholile ebaleni. Le ngelaphu ipholiyesta micro enemingxuma uphefumla kakhulu, e ...
Kwizinga eliphezulu breathable 55gsm ipholiyesta umnatha ngelaphu
Inkcazo yemveliso Olu laphu lwe-polyester enemingxunya, inombolo yento engu-HS2040, inithiweyo nge-100% yePolyester. Ine-weave evulekileyo enepateni eqhelekileyo yemingxunya ukugcina iimbaleki zipholile ebaleni. Eli laphu le-polyester liphefumla ngokuphefumla, ngaxeshanye, lilaphu elilukhuni eliqinileyo. Olu luhlu lwe-warp olukiweyo lilungile kwiyunifomu yeembaleki, ijezi yezemidlalo kunye nelining njl.njl.
Dri kufanelekile 100% ipholiyesta birdeye intaka iliso enemingxuma ngelaphu for zemidlalo
Inkcazo yemveliso: Le ntaka iliso iliso lwentaka, inombolo yento HS051, inithiweyo nge-100% yePolyester. Ilaphu le-Birdeye luhlobo lwelaphu elisebenzayo, ekwabizwa ngokuba lilaphu lokufunxa umbilo, elibonisa ukuba ilaphu lentaka enamehlo elintaka lilaphu elinokuphefumla. intaka iliso enemingxuma ilaphu lisetyenziswa ngokubanzi ukwenza zemidlalo, nto leyo ikakhulu ngenxa breathability kunye ukubila ukufunxeka. Singenza umsebenzi owahlukileyo we-accor yelaphu ...
Custom 100% ipholiyesta ephothiweyo intaka ephothiweyo ngelaphu enemingxuma ngelaphu for activewear
Inkcazo yemveliso: Le ntaka iliso iliso lwentaka, inombolo yento HS007, inithiweyo nge-100% yePolyester. Ilaphu le-Birdeye luhlobo lwelaphu elisebenzayo, ekwabizwa ngokuba lilaphu lokufunxa umbilo, elibonisa ukuba ilaphu lentaka enamehlo elintaka lilaphu elinokuphefumla. intaka iliso enemingxuma ilaphu lisetyenziswa ngokubanzi ukwenza zemidlalo, nto leyo ikakhulu ngenxa breathability kunye ukubila ukufunxeka. Singenza umsebenzi owahlukileyo we-accor yelaphu ...
Kwizinga eliphezulu ipholiyesta umsebenzi enzima umnatha umnatha ngelaphu playpen baby
Inkcazo yemveliso: Olu laphu lwe-polyester mesh, inqaku lethu le-FTT10276, linithiwe nge-100% ipholiyesta, kwaye ubunzima bayo yi-137gsm. Olu hlobo lomthwalo wemithwalo enzima liphefumla kakuhle, kwangaxeshanye, lilaphu elilukhuni eliqinileyo elinemvakalelo yesandla esomeleleyo. Olu luhlu lwe-warp knit ilungile kumdlalo wokudlala wosana, ukudlala ucingo lweyadi okanye iindawo apho ufuna ilaphu eliqinileyo, elinokuphefumla. Ukuze uhlangane ngokungqongqo ...
Ubunzima be-100% ye-polyester mesh yelaphu yokudlala ucingo lweyadi
Inkcazo yemveliso: Eli liphepha le-100% le-polyester mesh, inqaku lethu le-FTT10281, linithiwe nge-100% ipholiyesta, kwaye ubunzima bayo yi-227gsm. Olu hlobo lomsebenzi onzima womnatha ophefumlelweyo uphefumla kakhulu, kwangaxeshanye, lilaphu elilukhuni eliqinileyo elinemvakalelo yesandla esomeleleyo. Olu luhlu lwe-warp knit ilungile kumdlalo wokudlala wosana, ukudlala ucingo lweyadi okanye iindawo apho ufuna ilaphu eliqinileyo, elinokuphefumla. Ukuze ukuhlangabezana t ...
Ipholiyesta micro umnatha ephothiweyo ngelaphu for zemidlalo mesh lining ilaphu
Inkcazo Le polyester i-mesh ephothiweyo yelaphu, inombolo yenqaku HS2039, inithiwe i-70 denier i-100% ye-polyester filament yarn. Inesandla esivakalayo sokuziva kunye nesakhiwo esinokuphefumla esaneleyo ukubonelela ngonxibelelwano oluhle lolusu. Le ngelaphu ipholiyesta enemingxuma unalo ipateni imingxunya ezincinane ukugcina ilaphu kupholile, nto leyo efanelekileyo iilokhwe zasehlotyeni kunye ulwelwesi zemidlalo, iimpahla umthambo, banxibe lweembaleki, a ...
Ipholiyesta umnatha micro ngelaphu nezemidlalo
Inkcazo Le polyester i-mesh yelaphu, inqaku lethu le-FTT10033, lilukwe nge-75 denier ipholiyesta yentsimbi. Ilungile kuzo zombini iintloko kunye neebhotile zemidlalo kunye neempahla ezisebenzayo kwezemidlalo kubandakanya i-lacrosse, ibhola ekhatywayo, ibhola ekhatywayo kunye nebhasikithi Ine-weave evulekileyo enepateni eqhelekileyo yemingxunya encinci ukugcina iimbaleki zipholile ebaleni. Le ngelaphu ipholiyesta micro enemingxuma uphefumla kakhulu, kwi sa ...
Inkcazo Le DTY ipholiyesta enemingxuma yelinen yelinen, inqaku lethu lenombolo FTT10262, linemingxuma yedayimane. Olu luphawu lokuphefumla kunye noluthambileyo. Kwangelo xesha, ngenxa yeempawu zobuchwephesha bomsonto we-DTY, inolulwana oluncinci. Ilaphu le-Tricot lining lining lisetyenziswa njengombala phantsi kwempahla esebenzayo kunye nebhatyi. Amalaphu enemingxunya ayaphefumla kwaye ayasetyenziswa nanjengoko anokuwumba umbilo emzimbeni. Ngelo xesha ...
Yintoni ilaphu le-pique, kwaye kutheni ...
Okokuqala, uya kuthi uhlangane nemigaqo eyahlukeneyo kunye neendidi zamalaphu onokuthi ungaqhelani nawo xa ujonga amalaphu ahlukeneyo ...
Yintoni ilaphu le-tricot?
I-Tricot ivela kwisenzi sesiFrentshi tricoter, esithetha ukunitha. Indwangu yeTricot inesakhiwo esikhethekileyo se-zigzag ngombala kwelinye icala kwaye igudile ...